नेपालदृष्टि । बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्याका अभियुक्त पक्राऊ परेका छन् । उनलाई पक्राऊ गरेको पुष्टि प्रहरीले गरेको छ ।भागरथीको हत्या उनकै छिमेकी युवाले गरेको पत्ता लागेपछि उनलाई पक्राऊ गरिएको हो । ती युवकले भागरथीलाई भीरमा लडाएर बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेका हुन् । उनलाई आज प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दैछ ।
भागरथीको परिवारसँग ती युवकको परिवारको सम्बन्ध बिग्रेको थियो । त्यसपछि उनीहरु गाउँबाट एक किलोमिटर पर गएर बस्दै आएका थिए । समाजमा ती युवकको चालचलन ठिक थिएन ।
प्रहरीले भागरथीको परिवारको सम्बन्ध राम्रो नभएकाहरु देखि नजिकका सहपाठीहरुबारे बुझ्दै जाने क्रममा ती युवकको पहिचान गरेको थियो । तर, पक्राऊ भने गरिहालेको थिएन । युवक निगरानीमा थिए । अन्तमा उनी शंकास्पद रहेको पत्ता लागेपछि पक्राऊ गरिएको थियो ।
प्रहरीले सबै प्रमाण जुटाएपछि मात्र युवक नै हत्याका अभियुक्त भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । डिएनए टेष्टलगायत प्रक्रिया समेत बढाएपछि मात्र प्रहरीले भागरथी भट्टको हत्याका अभियुक्तबारे खुलासा गरेको हो ।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका डिआइजी उत्तमराज सुवेदीले रिपोर्टर्स नेपालसँग कुरा गर्दै हिजो दुई दिनभित्र हत्याका अभियुक्त सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । उनले हत्याका अभियुक्तको पहिचान भइसकेको खुलाएका थिए ।
दोषीबारे कुनै आशंका नरहोस् भन्ने हेतु यथेष्ठ प्रमाण जुटाउन प्रहरीले अनुसन्धानमा बढी समय लगाएको थियो । सम्पूर्ण प्रमाण संकलन गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने गरी शतर्कतापूर्वक अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन लागेको प्रहरीको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भागरथी हत्याका दोषी नजिक पुगिसकेको खुलासा गरेका थिए । उनले भनेका थिए,‘हामी अपराधीको नजिक पुगिसक्यौं, चाँडै सार्वजनिक गर्छौं ।’ गृहमन्त्री बादलको भनाईले पनि घटनाका दोषी पत्ता लागेको पुष्टि भइसकेको छ ।
२१ माघमा १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्या बलात्कारपछि भएको पुष्टि प्रहरीले गरिसकेको थियो । उनको शव २२ माघमा फेला परेको थियो । बलात्कारपछि भागरथीको घाँटी थिची हत्या गरिएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो ।
भागरथीको शव लवलेक जङ्गलको खोचलेक गिरेगडा सडकबाट ३० मिटर मुनीको झाडीमा उत्तानो अवस्थामा फेला परेको थियो । उनको शरीरमा नीलडाम र रगत समेत बगेको अवस्थामा भेटिएको थियो । प्रहरीले बलात्कारपछि हत्या पुष्टि गरिसकेको छ ।
सनातन धर्म मावि खोचलेकमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत भागरथीको घर र विद्यालयबीच जङ्गल पर्दछ । एक घन्टा पैदल दूरीमा पर्ने जङ्गलबाट घर फर्कने क्रममा भागरथी वेपत्ता भएकी थिइन् । विद्यालय छुटेपछि उनी हतार छ भनेर साथीलाई छाडेर गएकी थिइन् । तर, उनी घर पुगिनन् । साँझसम्म घर नफर्किएपछि उनको खोजी भएको थियो । - रिपोर्टर्स नेपाल
बिश्कै बढि यौन ब्यापार हुने ठाँउहरु
राष्ट्रकवि घिमिरेको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिदै
वास्तविक भीमसेन थापाको इतिहास हो यो पुस्तक
गर्मीका कारण विद्यालय धमाधम बन्द गरिँदै
किन फेरी प्रचण्ड–माधव समूह निर्वाचन आयोगमा ?
“पबजी” गेम किन प्रतिबन्धभयो ? त्यसका प्रशंसा, आलोचना र रमाइला प्रतिक्रियाहरु